Qaramada Midoobay oo sheegtay inay bedelayso wakiilkeedii Soomaaliya Haysom. | Saadaal Media
Qaramada Midoobay oo sheegtay inay bedelayso wakiilkeedii Soomaaliya Haysom.
Jan 4, 2019 - 3 Jawaabood
Xoghayaha guud ee QM António Guterres ayaa sheegay inuu ka xun yahay go’aanka dowladda Soomaaliya ay shaaca uga qaaday in wakiilkiisii Soomaaliya Nicholas Haysom aan dalka laga rabin (persona non grata)
Gutteres ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu kalsooni buuxdo ku qabo Mr. Hasyom,
haddana waxaa xoghayaha guud ee QM ahaan iga go’an xaqiijinta baahiyada dadka Soomaalida, oo ah shaqada hormuudka u ah xafiiska QM ee Soomaaliya. UNSOM waxay u baahan tahay inay sii waddo shaqadeeda taageeridda Soomaalida”
“Sidaas darteed waxaan soo magacaabayaa wakiilka cusub oo madax ka noqon doona xafiiska QM ee Soomaaliya ee UNSOM, sida ugu dhaqsiyaha badan” ayuu yiri.
War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres uu ugu yaraan Labo Jeer uu qadka Teleefanka kula hadlay Madaxwaynaha Soomaaliya isagoo ka codsaday in Soomaaliya ka laabato Go’aanka lagu Ceyriyay Haysom, hase ahaatee Madaxwayne Farmaajo waa diiday dalabkaasi, sidaasi waxaa sheegay afhayeenka Antonio Guterres Farxaan Xaq oo war saxaafadeedkan akhrinaya
HALKAN HOOSE KA DAAWO WAR SAXAAFADEDKA
Amisom-na Halaga Cayriyo Dalka Somaliya.
Dalka Soomaaliya Gacanta Shacabka Halagu Sooceliyo.
Shisheeyaha Iyo Kalkaaliyaashoodana!!?
Halaga ‘Sifeeyo Somaliya.
Halaga ‘Sifeeyo Somaliya. Iyo Arrimaheeda Gudaha.
Halaga ‘Sifeeyo Somaliya. Iyo Arrimaheeda Gudaha Iyo Siyaasadda.